တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့ တပ်မတော်၊ လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့ တပ်မတော်၊ လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဇေယျာသီရိ ဗိမာန်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးတို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ယင်းနောက် လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့သည် အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသော နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများကို အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG ၊ လာအို ပြည်သူ့တပ်မတော်မှအရာရှိကြီးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံစစ်သံမှူးတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင်နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်မှုနှင့် အဆင့်အလိုက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်မတော်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့် အားကစားအဖွဲ့များ၊ သင်တန်းသားများ အပြန်အလှန် စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားဆက်ဆံရေး ခိုင်မာတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာနှင့် လူကုန်ကူးမှုပြဿနာများမဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေရန်အတွက် တပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များကျရောက်ချိန်တွင် အပြန်အလှန် အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် နယ်မြေတည်ငြိမ်မှုပျက်ပြားပြီး တပ်မတော်မှ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေများ အားရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လာအိုအမျိုးသား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ လာအိုပွညျသူ့ တပျမတျော၊ လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ဂုဏျပွုကွိုဆို၊ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ ၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိဇယြောသီရိ ဗိမာနျရှေ့၌ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆိုသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေး ၀နျကွီးတို့သညျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏ အလေးပွုခွငျးကိုခံယူကွပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ကို လိုကျလံကွညျ့ရှုစဈဆေးသညျ။ ယငျးနောကျ လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျတို့သညျ အခမျးအနားတကျရောကျလာကွသော နှဈနိုငျငံတပျမတျောအရာရှိကွီးမြားကို အပွနျအလှနျမိတျဆကျပေးကွသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး ခငျအောငျမွငျ့နှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG ၊ လာအို ပွညျသူ့တပျမတျောမှအရာရှိကွီးမြားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံစဈသံမှူးတို့ တကျရောကျကွသညျ။
ထို့နောကျ လာအိုအမြိုးသားကာကှယျရေးဝနျကွီးသညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျရေးထိုးပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရာတှငျနှဈနိုငျငံ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျမှုနှငျ့ အဆငျ့အလိုကျဆကျသှယျဆောငျရှကျခွငျး၊ တပျမတျောယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားနှငျ့ အားကစားအဖှဲ့မြား၊ သငျတနျးသားမြား အပွနျအလှနျ စလှေတျခွငျးဖွငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားဆကျဆံရေး ခိုငျမာတိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတှငျ မူးယဈဆေးဝါးပွဿနာနှငျ့ လူကုနျကူးမှုပွဿနာမြားမဖွဈပျေါစရေေးနှငျ့ တညျငွိမျအေးခမျြးစရေနျအတှကျ တပျမတျောနှဈရပျကွားပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ သဘာဝဘေး အန်တရာယျမြားကရြောကျခြိနျတှငျ အပွနျအလှနျ အကူအညီပေးရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ARSA အစှနျးရောကျ ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြား၏ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားကွောငျ့ နယျမွတေညျငွိမျမှုပကျြပွားပွီး တပျမတျောမှ ဖွရှေငျး ဆောငျရှကျခဲ့မှုအခွအေနမြေား အားရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြး ဖလှယျဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ လာအိုအမြိုးသား ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ လာအိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieutenant General Chansamone Chanyalath ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dr. Vivian Balakrishnan ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ဖွဲ့သည် လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနိုင်မှု (Mobility) နှင့် ပစ်မှတ်ကို တိကျစွာပစ်ခတ်နိုင် မှု(Accuracy)များရှိရမည်ဖြစ်သဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင် အစဉ်အမြဲလေ့ကျင့်နေရမည်
မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ကလေး၊ ကျီကုန်းတပ်နယ် တီးတိန်မြို့ နယ်မြေခံတပ်ဌာနချုပ်နှင့် ဟားခါးတပ်နယ်တို့ရှိ အရာရှိ၊ စစ်သည် မိသားစုများအား သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
မတ် ၁၀၊ ၂၀၂၀ Admin 0